Semalt Inogovera "Google Bhizinesi Yangu" Zvinokosha Zvose SEO Champion Unofanira Kuziva
Makambani mazhinji ane mahofisi emahofisi uye e-commerce nzvimbo. Kukurudzira vatengikutenga kuburikidza nechitoro chekunyama kunokosha pakuvandudza kutengesa mari. Uyezve, uchishandisa Search Engine Optimization (SEO)kukurudzira vatengi vepamusoro kunowedzera kuwanda kwekutengesa Google yatanga purogiramu inozadza-iyo inovandudza vatungamiri vebhizimisinzvimbo yeruzivo - caminetti in ghisa prezzi. Izvo zvinogona kuwanikwa nekushandisa tsvakurudzo yeGoogle tsvaga.
Frank Abagnale, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji Semalt Digital Services, inopa tsanangudzo yepurogiramu kuti iwe ushandise zvizere nezvayo.
Zvikamu zveGoogle My Business App:
Mushandisi anokwanisa kutarisira nzvimbo dzakawanda dzebhizimisi achishandisa rimwe dashboard.
Bhizimisi bhizimusi anogona kuchinja zita, kero, uye maawa ekushanda kwebhizimisi.
Mushandisi anogona kuongorora uye kupindura kuongororwa kwevatengi kuburikidza ne app.
Kuvandudza mapikicha uye zvinyorwa zvinoitwa nyore nyore kuburikidza nepaGoogle + platform.
Nyaya yepamusoro ye analytics inovandudza kuzivikanwa kwepaIndaneti uye vatengi vanoita basa.
Kugadziridza kweGoogle My Business yebhiyo kune zvimwe zvinhu zvinonakidzakune muridzi wemabhizimisi. Izvi zvinowedzera zvinosanganisira:
Cherechedza kuti bhizinesi rinoratidzwa sei muGoogle, Google Maps, uye Google kutsvaga.
Ongorora maitiro ekuongorora anogadzirwa neGoogle +.
Tsvaga mhinduro dzakawanda kuburikidza nekuongororwa kwevatengi uye zveruzivo rwekugara.
Tungamirira nzvimbo chero ipi zvayo..
Ratidza nzvimbo yekero neposesi yezvikwata zvebhizimisi dzakatambisa mabasa.
I-Android app inowanika paGoogle Play. Uyewo, iyo iOS app inogona kutorwakubva kuApp's App Store. Izvo zvakasununguka kutora kana kuvandudza purogiramu yeGoogle Bhizimisi. Iro app yeGoogle Bhizinesi yangu inobatanidza ne SEOkeywords, app yeYouTube, uye app Google Analytics, kubatanidza data kana ruzivo rwunoda kuziva nzvimbo itsva yeruzivo.
Kunzwisisa Google My Business
Chikamu cheGoogle My Business Overview chinoratidza zvinhu zvinokosha zvepurogiramu.Peji yeGoogle Bhizinesi rekubatsira ini inopa ruzivo rwakakosha pamusoro pekushandisa purogiramu. Izvo hazvina mari inoshandiswa pakushandisa purogiramu. Inongoda cheteiyo nguva uye dhiyabhorosi yekuvandudza kushandiswa kwemushandisi. Bhizimisi wemabhizimisi ane nzvimbo dzinoverengeka anofanira kuisa mberi nzvimbo dzakakwirira zvichienderana nemarikukosha kana mazano anobatsira. Nzvimbo idzi dzinogona kuiswa pane imwechete kana zvakawanda kuburikidza nekushandisa pepanheta kana vari kupfuura 10 Bhizinesimuridzi anofanira kuumba Bhizinesi reBusiness kana nzvimbo dziri kutarisirwa nevanhu vanoverengeka.
Kuvandudza Ongororo Yemunharaunda
Kutsvaga kwepasi kunosanganisira chirongwa che SEO. Icho chinonyatsotsanangura kupfuura chinonzi Google,Bing, uye Yahoo inotsvaga paIndaneti. Musha wekutsvaga unogadzira migumisiro uchishandisa mapikirwo emagetsi; somuenzaniso, Google Maps, Apple Maps, Foursquare,Yellow Pages, uye Trip Advisor. Iko SEO inovandudza kuonekwa kwebhizimisi uye inotengesa vatengi vepanzvimbo. Inosanganisira kuparadzira dambudziko rinokosha kunemazana emasayiti eIndaneti. Kuvandudza hutsva hwekutsvaga kunzvimbo kunoda shanduro yepurogiramu yakadai seGoogle My Business. Ndiyo huruonline search engine munyika yose. Mepu yepamusoro yepurogiramu yepurogiramu yakakosha pakuvandudza kutsvaga kwekune nzvimbo dzebhizimisi nzvimbo.
Shanduro yeGoogle Bhizinesi inobatsira mukuvandudza kuonekwa kwekambani kwebhizimisi.Vatengesi vemigwagwa vachagara vachikwirira munzvimbo dzebhizimisi dzine nzvimbo yakawanda iripo paIndaneti. Chinangwa chikuru chebhizimisi chero ripi zvarokuti kuve nekutengesa kwepamusoro kutengesa kubva kune vatengi vanoshanyira nzvimbo dzepaIndaneti.